News - Iyada oo qayb ka ah mashruuca ChemCycling, BASF waxay 16 milyan oo euro ku maal-galisay shirkadda saliidda taayarka ee Pyrolysis oil Pyrum
BASF SE waxay 16 malyan oo Euro ku maalgashatay shirkadda Pyrum Innovations AG, oo ah shirkad ku takhasustay tiknoolajiyada qashinka tiknoolajiyada, xarunteeduna tahay magaalada Dillingen / Saarland, Jarmalka. Maalgashigan, BASF waxay ku taageeri doontaa balaarinta dhirta Pyrolysis-ka Pyrum ee Dillingen iyo kor u qaadista tikniyoolajiyadda.
Pyrum wuxuu hadda ku shaqeeyaa warshad pyrolysis ah oo loogu talagalay taayirada duugga ah, oo shaqeyn kara ilaa 10,000 tan oo taayirro ah sanadkiiba. Dhamaadka sanadka 2022, labo khad oo wax soo saar ayaa lagu dari doonaa warshada hada jirta.
BASF waxay nuugi doontaa inta badan saliidda pyrolysis waxayna u adeegsan doontaa qayb ka mid ah habka dheelitirka miisaanka oo qayb ka ah mashruuca dib-u-warshadaynta kiimikada si loogu farsameeyo alaabada kiimikada cusub. Badeecada ugu dambeysa waxay badiyaa u noqon doontaa macaamiisha ku jira warshadaha caaga ah ee raadinaya caag tayo sare leh oo shaqeynaya oo ku saleysan walxaha dib loo warshadeeyay.
Intaas waxaa sii dheer, Pyrum wuxuu qorsheynayaa inuu dhisto dhir kale oo taayirro pyrolysis ah oo lala yeesho la-hawlgalayaal daneynaya. Dejinta iskaashigu waxay xawaareyn doontaa wadada loo adeegsanayo tiknoolajiyada gaarka ah ee Pyrum ee wax soo saarka ballaaran. Maalgashadayaasha mustaqbalka ee tikniyoolajiyaddan waxay hubin karaan in saliidda loo yaqaan 'pyrolysis oil' ee ay soo saarto ay nuugi doonto BASF loona adeegsan doono soo saaridda wax soo saarka kiimikada ee waxqabadka sarreeya. Sidaa darteed, iskaashigu wuxuu gacan ka geysan doonaa xiritaanka meertada qashinka bacda macaamiisha kadib. Sida laga soo xigtay DIN EN ISO 14021: 2016-07, taayirada qashinka waxaa lagu qeexaa inay yihiin qashinka caagga ka dambeeya ee macaamiisha.
BASF iyo Pyrum waxay filayaan in, iyaga iyo wada-hawlgalayaasha kale, ay ka dhisi karaan ilaa 100,000 tan oo ah awoodda wax soo saarka saliidda pyrolysis ee taayirada qashinka sannadaha soo socda.
BASF waxaa ka go'an inay u horseedo kala-wareegga warshadaha caagagga dhaqaalaha wareegsan. Bilowga silsiladda qiimaha kiimikada, ku beddelidda alaabta ceyriinka ah ee lafaha leh alaabta ceeriin ee dib loo cusboonaysiin karo waa habka ugu weyn ee arrintan laga hadlayo. Maalgashigan, waxaan qaadnay tallaabo muhiim ah anaga oo aasaasnay ​​saldhig ballaaran oo sahayda loogu talagalay saliidda pyrolysis isla markaana macaamiisha u siineyno alaabo ganacsi oo baaxad leh oo ku saleysan qashinka balaastigga ah ee kiimikada dib loo warshadeeyay.
BASF waxay u adeegsan doontaa saliida pyrolysis ee taayirada duugga ah walxo cayriin oo dheeri ah oo loogu talagalay saliida qashinka caagga ah ee isku qasan, taas oo ah diiradda muddada fog ee mashruuca dib u warshadeynta kiimikada.
Waxyaabaha laga sameeyay saliida pyrolysis iyadoo la adeegsanayo habka isku dheelitirka tirada waxay leeyihiin astaamo isku mid ah sida alaabada lagu sameeyay iyadoo la adeegsanayo kheyraadka waaweyn ee haraaga. Intaa waxaa dheer, waxay leeyihiin raadad kaarboon ka hooseeya marka la barbar dhigo badeecooyinka dhaqameed. Tani waa gabagabada falanqaynta Life Cycle Assessment (LCA) oo ay fulisay shirkadda latalinta ee Sphera iyadoo wakiil ka ah BASF.
Falanqaynta LCA gaar ahaan waxay cadeyn kartaa in xaaladan loo isticmaali karo in lagu soo saaro polyamide 6 (PA6), taas oo ah polymer caag ah, tusaale ahaan, soo saarida qeybaha waxqabadka sare ee warshadaha baabuurta. Marka loo barbardhigo hal tan oo PA6 ah oo la soo saaray iyadoo la isticmaalayo walxo ceeriin fosil ah, hal tan oo PA6 ah oo la soo saaray iyadoo la isticmaalayo saliidda Pyrolysis tire pyrolysis iyada oo loo marayo habka dheelitirka tirada waxay yareysaa qiiqa kaarboon dioxide qiiqa 1.3 tan. Qiiqa hoose ayaa ka imanaya ka fogaanshaha gubista taayirada duugga ah.
La daabacay Oktoobar 5, 2020 gudaha Falanqaynta Wareegga Nolosha, Taariikhda Suuqa, Caagagga, Dib u warshadeynta, Taayirada | Permalink | Faallooyin (0)
Mashiinka Dib-u-warshadaynta Taayirada Qashinka, Taayirada Pyrolysis, Sifee caag ah, Mashiinka Dib-u-warshadaynta Caaga, Warshad Pyrolysis joogto ah, Dufcaddii Pyrolysis Plant,